प्रचण्डलाई फेरि एक्कासी के आइलाग्यो ? पत्नी सीता दाहाल अस्पतालमा भर्ना – Tufan Media News
प्रचण्डलाई फेरि एक्कासी के आइलाग्यो ? पत्नी सीता दाहाल अस्पतालमा भर्ना
१५ पुष २०७७, बुधबार १५:१४
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) (प्रचण्ड–माधव पक्ष) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की पत्नी सीता दाहाल अस्वस्थ बनेकी छन् । अस्वस्थ बनेपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । छोरी गंगा दाहालले सीताको तस्विर सेयर गर्दै उनको उपचार भइरहेको जनाएकी छन् ।
सीता दाहाल पा’र्किन्सन जस्तो देखिने एक ज’टिल प्रकारको रोगले पीडित छिन् । त्यसलाई प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी (पीएसपी) भनिन्छ । यसअघि उनको अमेरिकास्थित जोन ह’प्किन्स अस्पतालमा समेत उपचार भएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा आफ्नो मौलिक परम्परा भएको देशका रूपमा स्थापित रहेको बताएका छन् ।
‘तमु (गुरुङ) समुदायको तमु ल्होसार, किराँत समुदायको उधौली र नेवार समुदायको यःमरी पुन्हीका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै अध्यक्ष दाहालले विविधताभित्रको एकता नेपाली समाजको विशेषता भएको बताएका छन् ।
यिनै सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतासहितका परम्पराबीचको आपसी सहिष्णुताले नै नेपालीको मौलिक पहिचान बनेको पनि दाहालले दिएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले पनि नेपाली समाजमा भएका यिनै विभिन्न समुदायका अधिकार र पहिचानलाई मूर्तिकृत गरेको स्मरण गर्दै उनले आआफ्नै परम्परा र संस्कृतिका रुपमा मनाइँदै आएका यी चाडपर्व यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यानमा राखी पूर्वसावधानीका उपाय अवलम्बन गर्दै मनाउन सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
देशभर चिसो बढ्यो, सतर्कता
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान
नेपालले भारतलाई विद्युत बेच्ने
आफुलाई हड्डीहड्डी दिएको भन्दै
दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल